Ukuthumelelana imiyalezo nge-SMS - Isimo esiyingozi phakathi kwentsha
Ukuthumela imiyalezo nge-SMS - isimo esiyingozi | Ubulili nokukhanyisa
Ukuthumelelana izithombe nge-SMS kungaba yingozi kakhulu kulabo abathintekayo
Isiphetho esiphetha - ungathinti ukuthumela imiyalezo nge-SMS!
Igama elithi i-sexting lenziwa ngamazwi ngokobulili nokuthumela imiyalezo ngokulandelanayo futhi ihlanganisa ukusakazwa kokuqukethwe okweqile nge-Whatsapp noma amanethiwekhi omphakathi njenge-Facebook. Ngomqondo obanzi, ukuthumela imiyalezo ngezokuthutha kufaka phakathi ukuthumela nokukwabelana ngezithombe ezinkingeni ezibucayi kanye nezingxenye ezizimele.
Le mkhuba yentsha manje ibhekwa njengokungabaza kakhulu, ngoba izithombe ezithunyelwe noma ezilayishiwe zivame ukungena ezandleni ezingafanele.
I-Trend Trend Yezokuthumela I-Trend - I-Virtual Striptease
Ngokungajwayelekile, izithombe ezihloselwe abangane noma noma yimuphi omunye umuntu ziphelela kumasayithi wezocansi, asetshenziswa abahlinzeki ngaphandle kwemvume yomuntu siqu.
Ngokuyinhloko, noma yikuphi umlayezo othunyelwe okuqukethwe okusondelene kuyingozi, ngoba abathintekayo kusuka kulo mzuzu kaningi abanamandla futhi abasakwazi ukulawula ukubuyisela emuva okungenzeka.
Kungani ukuthumela imiyalezo nge-imeyli kudume kangaka nabantu abasha?
Ikakhulukazi intsha ekukhusheni ijwayele ukufuna ukufakazela kwabanye abangane. Ngokuvamile, okuqukethwe okukhathazayo kuyathunyelwa phakathi kwabahlobo ukubonisa izimfanelo zomzimba wabo nokuzidumisa.
Ngale ndlela, intsha ikhulisa ukuzethemba kwayo futhi ngaleyo ndlela izuze ekuthumeleni imiyalezo ye-SMS. Ngaphezu kwalokho, ukuthunyelwa kokuqukethwe okungazenzisi kusetshenziselwa ngokuyinhloko ebuhlotsheni ukubonisa lo mlingani uthando lwakhe nokuvusa ngocansi.
Yiqiniso, ukuthumelelana imiyalezo nge-SMS kubangela ezinye izingozi kubasebenzisi, ngoba lezi ziyizintsha ikakhulukazi. Njengoba wazi, ubudlelwane abuhlali isikhathi eside kule minyaka futhi ngakho-ke kungasetshenziswa yiqembu elilodwa ukucindezela omunye. Kulo mongo, ukushicilelwa kwezithombe kuvame ukusongelwa, ikakhulukazi kumanethiwekhi omphakathi njenge-Facebook noma i-Twitter.
Isiphetho - qaphela, lapho uveza okuthile ngawe!
Kodwa ngisho nangokwemvelo kungase kufike ekuthumeleni okuqukethwe, uma umlayezo we-Whatsapp, isibonelo, uthunyelwe abantu ngephutha. Ngaphezu kwalokho, izithombe ezitholiwe zivame ukugcinwa ngokuzenzekelayo, ezingabangela isimo esihlazo lapho sibonisa igalari yakhe ukukhombisa izithombe eziseduze zabantu abathathu.
Ukutholakala kwezithombe ezingenasithunzi zabantu abangaphansi komzimba kungumngcingo omkhulu, njengoba lokhu kungase kubhekwe njengecala lezithombe zocansi ezinganeni.
Ungazivikela kanjani njengomamukeli noma umthumeli ngokumelene nezingozi ngangokunokwenzeka?
Njengomthumeli ngaphambi kokuthumela okuqukethwe kokudinga ukukhula kwandisa ukulawula. Kufanele uhlole umugqa womamukeli kabili futhi unake izilungiselelo zefoni.
Isibonelo, uma ulayisha izithombe ku-Facebook, izethameli zingacaciswa. Ngaphezu kwalokho, ukusondelana akufanele kubonise ubuso noma izici ezikhethekile, ukuze kungonakaliswe ekusatshalalisweni njengesisulu. Uma umuntu ethola ezithombeni ezingezansi ze-Sexting, umuntu kufanele asuse isithombe naphezu kokukhangiswa okungenzeka kube khona ngokushesha.
Ngalesi silinganiso esisodwa asisitholi okuqukethwe okungcolile (ingane) ngokocansi ngakho-ke nakanjani endaweni ephephile. Ngaphezu kwalokho, ingozi yokushicilelwa okungafuneki uma kwenzeka ukusetshenziswa kabi kwe-smartphone ngabangani noma ukulahlekelwa.
Ukuthumelelana imiyalezo nge-sexting kusetshenziswe ngokungenasisekelo ngabantu abasha kakhulu, okwandisa kakhulu ingozi yokusabalalisa okungadingeki. Yiqiniso, njengoba usemusha, kungenzeka ukuthi ucindezelwe abangane ngakho-ke uthumele izithombe eziseduze kusuka ekucindezelweni kontanga.
Noma kunjalo, akekho othanda ukuvela kumawebhusayithi angcolile ngaphandle kwemvume yawo futhi ngaleyo ndlela angase abe ngokoqobo phambi kwezigidi zabantu.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi okungenani ubheke izingozi zokuthumelelana imiyalezo ngeposi nokuthatha izinyathelo ezifanayo. Kufanele uhlale unake ukuthi ubani ngempela othumela izithombe nokuthi ngabe ngengozi ngenxa yezilungiselelo ze-Smartphone ubala ngokuzenzakalelayo bonke oxhumana nabo njengabawamukeli. Kunconywa ikakhulukazi ukuthunyelwa kokuqukethwe okwenyukayo okukwenza ungabonakali futhi awukho ubuso noma ezinye izici ezijwayelekile.
Ekugcineni, kuhlale kusongelwa, ngakho-ke kumele okungenani ubuze isidingo salesi simiso sentsha.